Substance Painter - VERTEX ANIMATION STUDIO
Substance Painter သင်တန်း
Substance Painter Software သည် 3D texture painting and PBR material Creation Software ဖြစ်ပါတယ်။ Layer based system အပြင် procedural နဲ့ Hand painting ကိုအချိုး ညီညီ ရောစပ်အသုံး ချနိုင်တာကြောင့် အသုံးများလာသော Softwar ဖြစ်ပါတယ်။
Substance painter software သည် PBR ( Physical Based Rendering) material စနစ်ကို အ ခြေခံထားသော ကြောင့် Game Industry တွင် အလုပ်လုပ် ကိုင်လို သူများ မဖြစ် မ နေတတ်မြောက် ထားရမည့် software တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ​
Substance painter software သည် 3D model texture creation software ဖြစ်တာကြောင့် 3D software တစ်ခု ခုကို တတ်မြောက်ထားပြီးမှသာ သင်ကြားနိုင်မည် ဖြစ်ပါတယ်။ 3Ds Max, Maya, စသည့် software တစ်ခုခု တတ် မြောက် ထားရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် uv unwrap ပြုလုပ် ခြင်းနည်းစနစ်ကို ကျွမ်းကျင် စွာ တတ် မြောက် ထားရပါမယ်။ ​
Substance painter သင်တန်း တက်ရန် လိုအပ်ချက်များ​
Laptop (or) Desktop computer: CPU : i5 , Memory: 8 GB (Windows or Apple computer) Model အလွန်နိမ့် သော computer များသည် Graphic Card နိမ့်သဖြင့် software တင်လို့ မရပါ။
Substance painter ကိုသင်ကြားလိုသူများသည် 3Ds Max ( သို့ ) Maya တစ်ခုခု တတ်မြောက် ထားသူဖြစ်ရပါမယ်။
Substance painter သည် wacom graphic tablet များကို support လုပ်ပါတယ်။ Grphic pen ကိုသုံးနိုင်ပါက ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မရှိရင်လဲ သုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်။
Computer Graphic Pen
Space Craft painting
Texture Painting: Substance painter Vs Zbrush
Zbrush တွင် texture painting ပြုလုပ်ရန် အတွက် ံHigh subdivision model များလိုအပ်ပါတယ်။ အချို့ model များမှာ subdivision ပြုလုပ်လို့ မရသည့် အခက်အခဲများ ရှိပါတယ်။
Substance Painter Software သည် unwrap ပြုလုပ် ထားသော Low poly model များပေါ်တွင် တိုက်ရိုက် အသုံးပြု နိုင်သဖြင့် Game mdoel များအတွက် အလွန် ကောင်းမွန် ပါတယ်။
Zbrush မှထုတ်ပေးသော Texture များ၏ resolution မှာ model ၏ subdivision ပြုလုပ်ထားသော point amount ပေါ် မူတည်ပါတယ် ။ ဒါ ကြောင့် High resolution map များပြုလုပ်ရာတွင် အခက်အခဲ ရှိပါတယ်။
Substance painter တွင် Low poly model ပေါ်မှာပါ high re- solution texture များကို အလွယ်တကူဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ စက်မနိုင်ပါက low resolution texture ကိုဖန်တီးပြီး output ထုတ်သော အခါမှ High resolution quality ကိုမြှင့်ပြီး ထုတ်ယူ နိုင်ပါတယ်။
Substance Painter Course Outline
Vertex Animation Studio တွင် Substance painter သင်တန်းတက်ရောက်ပါက အောက်ပါ topic များကို နည်းစနစ်တကျ တက်မြောက်စေရန် ဂရုစိုက် သင်ကြားပေးပါတယ်
Import model and Project setting
Bump map Creation.
From Bump map to normal map
Texture baking using created normal map
Painting tools and technique
7. Importing custom alpha
8. Unwrap technique in 3ds Max
9. Using layers and blending modes
10. Exporting textures
11. Different formats for different projects.
12. Using created maps in target application
Zbrush တွင် Texture painting ပြုလုပ်ပါက color map တစ်မျိုးကိုသာ painting ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Substance painter တွင် texture painting ပြုလုပ်ရာတွင် color map, Specular map, roughness , glossiness, normal map, height map စသည်ဖြင့် 3D program များ တွင်သုံးသော maps များကို စုံလင် စွာ ဖန် တီးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် 3D modeling ပြုလုပ်တတ်သူများ အ နေဖြင့် မိမိ ဖန်တီး ထားသော 3d model များကို ပိုမို ကောင်းမွန် လာစေ ရန် Substance Painter Software ဖြင့် အဆင့်မြှင်တင် ပေးနိုင် ပါတယ်။​